Villa Soomaaliya oo ka hadashay Wararka sheegaya in Farmaajo heesto Dhalashada Canada | Allbanaadir.com
Home NEWS Villa Soomaaliya oo ka hadashay Wararka sheegaya in Farmaajo heesto Dhalashada Canada
Wargeyska New York Times ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa dhawaan qoray warbixin ku saabsan sababtii Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga celiyay Dhalashada dalka Mareykanka uu heestay.
Waxa uu sidoo kale wargeyskan qoray in Madaxweyne Farmaajo uu heesto dhalashada dalka Canada uu sanado badan ku noolaa, waxa uuna sheegay Wargeyska in Farmaajo isku heestay dhalashada labada dal ee Canada iyo Mareykanka.
Agaasimaha warfaafinta Madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Xaashi ayaa been abuur ku tilmaamay warbixinta lagu qoray wargeyska New York Times, waxa uuna agaasimaha cadeeyay in Farmaajo uu heesto kaliya baasaboorka Soomaaliga.
“Waan akhriyey waxa wargeyska uu qoray. Run ahaantii warar aan sal iyo raad lahayn ayaa ku jira, madaxweynahu waxa uu haystaa baasaboorka Soomaaliya, hore na wuxuu u haystay ka nMaraykanka, waana kii iska dhiibey madaxweynuhu, si uu shaqadan uu u dhaartay ee madaxtinnimo ee dalka uu si hufan ugu guto. Ma jirto markaa dal kale oo dhalashadiisa uu haysto oo aan ka ahayn Soomaaliya” ayuu yiri Cabdirashiid.
Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale meesha ka saaray in sababtii Madaxweyne Farmaajo isaga celiyay dhalashada Mareykanka in ay aheyd baaritaano lagu bilaabay hantidiisa si dacwado loogu soo oogo.
”Sababta madaxweynuhu u celiyey baasaboorka Maraykanka waa sheeko dheer, faahfaahinteedana aan hore u bixinnay, kuma jirto marnaba in uu sababo kale u dhiibay , Madaxweynaha jamhuuriyadda wax dacwada oo xilliyadas kaga socotay Maraykanka ma jirto, weligiina laguma soo eedayn”, ayuu yidhi Cabdirashiid Xaashi.
Warkan kasoo baxay Villa Soomaaliya ayaa imaanaya xili hadal heyn ka dhalatay in Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya uu heesto dhalashada dalka Canada uuna qarsanayo.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo la kulmay Madaxda qaar kamid Warbaahinta Taageersan (Sawirro)
Next articleWasiirad Sumcad daro u keentay dalkeeda oo xilka laga qaaday kadibna la xiray !!